တင်မောင်ထွေး – အတုယူစရာ စင်ကာပူက လူမျိုးဘာသာကွဲပြားမှု | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး - နာမည်ကြီးများကို ပရိသတ်ဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်ပေးဆွဲ ခြိမ်းခြောက်မှု မလုပ်သင့်ပါ
ကျနော်တို့က လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သဟာဇာတဖြစ်ခြင်းကို အာမခံပေးနိုင်ပြီလို့ ဘယ်တော့မှ မဆိုသာဘူး။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းမယ်၊ ဒါ့ပြင် တချိန်ထဲမှာပဲ အခြေခံနည်းနာအချို့ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်။ အဲဒီ အခြေခံနည်းနာတွေထဲက အချို့ကို ပြောပြချင်တယ်။ ပထမက အုပ်စုအားလုံးသည် (ဆန့်ကျင်ဘက် ဘာသာသာသနာအားလုံးကို) သည်းခံတတ်ရမယ်၊ အစွန်းမ ရောက်ဘဲ အလယ်အလတ်သဘောထားမျိုး ထားရမယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကလည်း ဒီ (စင်ကာပူနိုင်ငံ) ကို ခရစ်ယာန် အသိုက်အ၀န်းကြီး ဖြစ်လာရမယ်လို့ မျှော်မှန်းနေလို့ မရဘူး။ မွတ်စလင်တွေကလည်း ဒီနိုင်ငံကြီးကို မွတ်စလင်နိုင်ငံ အသိုက်အ၀န်းဖြစ်လာရမယ်လို့ မျှော်မှန်းလို့ မရဘူး။ ဒီလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ၊ ဟိန္ဒူနဲ့ အခြားအုပ်စုတွေကလည်း မျှော်မှန်းနေလို့ မရဘူး။ ဒီမြေကို မတူကွဲပြားတဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေ အများကြီးက (တခန်းတကဏ္ဍစီ) နေရာယူထားတယ်။
မလေးကျွန်းဆွယ်ထိပ်မှာ တည်ရှိပြီး ၇၁၆ စတုရန်းကီလိုမီတာအကျယ်သာရှိတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကို city-state ခေါ် မြို့တစ်မြို့ထဲသာရှိတဲ့ နိုင်ငံရယ်လို့ သိကြပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ လူဦးရေ ၅ မီလီယံရှိပါတယ်။ အဲဒီ လူဦးရေ ၅ မီလီယံမှာ အဓိက လူမျိုးစု ၄ ခုပေါင်းစပ်ပါဝင်နေပါတယ်။ အများစုကတော့ တရုတ် ၇၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဲဒီနောက်က မလေး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အိန္ဒိယ ၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြားလူမျိုးစုက ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါ တယ်။
နိုင်ငံသေးသေးလေးဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူမှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ ယှဉ်ရင် သာသနာပေါင်း ၁၀ ခုထိရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၊ တာအို၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူနဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာတွေက အဓိက ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာတွေဖြစ်ပြီး ဆစ်ခ်၊ ဂျိန်းဝါဒ၊ ဇိုရိုအေစတာ၊ ဘဟာအီနဲ့ free thinker ခေါ် ဘယ်ဘာသာကိုမှ နောက်လိုက်ခြင်းမရှိတဲ့ အုပ်စု စတဲ့အုပ်စုများကတော့ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမယ့် လူနည်းစုစာရင်းဝင် ဘာသာရေး အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အခြေဆိုက် လူမှုရေးအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ Pew Research Center ရဲ့ အဆိုအရ စင်ကာပူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သာသနာအမျိုးအစား ပျံ့နှံ့မှုအများဆုံးလို့ သိရပါတယ်။ (www.pewforum.org/2014/04/04/global-religious-diversity/)
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက စင်ကာပူမှာ လူတစ်ဦးဟာ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ သာသနာက ပြဌာန်းထားတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေအပြင် အခြား သာသနာတစ်ခုသို့မဟုတ် အများရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကိုပါ လက်ခံကျင့်သုံးနေတာမျိုးကို သမရိုးကျကိစ္စတစ်ခုလိုမျိုး မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် polytheistic ခေါ် ဘုရားအများကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာအုပ်စုဝင်တွေမှာ တွေ့ရတာပါ။ ဒါကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တာအို၊ ကွန်ဖြူး ရှပ်နဲ့ ရိုးရာဘိုးဘွားမိဘတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ ယုံကြည်မှု စတာတွေဟာ အလေ့အကျင့်အားဖြင့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပေါင်းစပ်ရောယှက်နေ တာကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လမ်းဘေးတဘက်တချက်မှာရှိတဲ့ သာသနိကအဆောက်အဦငယ်တွေမှာ ဟိန္ဒူတွေရဲ့ ဂနေသျှား၊ ဟာနုမာ၊ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ယေရှု၊ မယ်တော် မာယာ သာမက အာဖရို-အမေရိကန် ဘာသာအများစုမှာ ထင်ရှားတဲ့ ပင်လယ်နတ်ဘုရားမ (Mother Goddess of the Sea) ရုပ်တုတွေပါ တစ်နေရာထဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓနဲ့ တရုတ်လူမျိုးများကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာသာသနာများအကြား မှာတော့ သာသနာ တစ်ခုရဲ့ ဘာသာရေးအခမ်းအနား ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးအလေ့အကျင့် ထုံးတမ်းတွေမှာ အခြားဘာသာဝင်များကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ စင်ကာပူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၃၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ တာအို ၁၀.၉ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ခရစ်ယာန် ၁၈.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် ၁၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ ၅.၁ နဲ့ အခြားဘာသာ ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ ဘာသာမဲ့ကတော့ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ (ပုံ – က)
ပုံ – ခ ကတော့ ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကို လူမျိုးစုတွေအလိုက်ပြန်ပြီး ခွဲထုတ်ပြထားတာပါ။ ဗုဒ္ဓနဲ့ တာအိုဘာသာကိုတော့ တရုတ်လူမျိုးတွေ အများဆုံးကိုးကွယ်ပါတယ်။ မလေးလူမျိုးတွေကတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးဖြစ်နေတာ အံ့သြစရာမဟုတ်သလို အိန္ဒိယ လူမျိုးစုတွေမှာလည်း ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများဆုံးဖြစ်နေတာကလည်း အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့် သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ တရုတ်တွေဟာ မလေးနဲ့ အိန္ဒိယတို့ထက်ပိုပြီး ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ပြောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ အဲဒီအချက်ကိုလည်း ပုံ (ခ) ပါ စာရင်းဇယားတွေက ရည်ညွှန်းဖော်ပြ နေပါတယ်။ ဥပမာ တရုတ်လူမျိုးတွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓ ဒါမှမဟုတ် တာအိုဘာသာဝင်တွေက ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ၆၄ ရာနှုန်းကျော်ရှိပေမယ့် ၂၀၁၀ ကျတော့ ၅၇ ရာနှုန်းကျော်ကို လျော့ကျသွားတယ်။ ခရစ်ယာန်၊ အခြားဘာသာနဲ့ ဘာသာမဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကျတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှိုင်းယှဉ်ရင် ပမာဏ မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းအရ သာသနာပျံ့နှံ့မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်
စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) ရဲ့ သာသနာရေးကဏ္ဍတွေအပေါ် အထူးပြုလေ့လာတဲ့ ပရောဖက်ဆာ လီလီကောင်း (www.nus.edu.sg/about-nus/nus-structure/management/item/9-professor-lily-kong) ကတော့ စင်ကာပူရဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာရင်း ဇယားတွေက တခါတလေ မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေပါလို့ ဆိုကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ တကယ့်ဗုဒ္ဓဒေသနာတွေအတိုင်း နေထိုင်ပြုမူဆောင်ရွက်ကြတာမျိုး မရှိကြဘူး လို့ဆိုပါ တယ်။
ဒါ့ပြင် လီလီကောင်းက အခုလို မှတ်ချက်ပေးပြန်ပါတယ်။ တရုတ်ဘာသာဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် နတ်ဘုရားနဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာပါပဲ။ အဲဒီနတ်ဘုရားတွေထဲမှာ စစ်မက်တွေကို အစိုးရတဲ့ နတ်ဘုရားကနေ ကွန်ဖြူးရှပ်အထိ၊ ကွမ်ယင်မယ်တော်ကနေ တုဒိဂုန်လို့ခေါ်တဲ့ မြေနတ်မင်း၊ မာဇူးလို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်နတ်ဘုရားမ တို့ပါဝင်ပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ ပိုပြီးတော့ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒီတော့ တရုတ်ဘာသာ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ် ဘူးဆိုတာလည်း သူတို့ သိလာကြတာနဲ့အမျှ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေပါလို့ ခေါ်ဆိုမှုတွေလည်း လျော့လာတယ်။” လို့ လီလီကောင်းက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သူမက အဲဒီတရုတ်ဘာသာဝင်အများစုဟာ အခုအခါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တာအိုဘာသာဝင်တွေလို့ သတ်မှတ်လာကြကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အရေအတွက်ဟာလည်း လျော့နည်းလာပြီး တာအိုဘာသာဝင် အရေအတွက် တိုးလာ ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် စင်ကာပူ သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်တွေအရ ပညာတတ်အရေအတွက် တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဘာသာမဲ့ရာနှုန်းလည်း တိုးတက်လာကြောင်း သိရပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကနေ ဘွဲ့ရရှိထားကြသူတွေထဲမှာ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းက ဘာသာမဲ့တွေ ဖြစ်နေတာ ကလည်း ပညာတတ်ဖြစ်လာမှုနှုန်းနဲ့ ဘာသာမဲ့အရေအတွက်တိုးလာမှု တိုက်ရိုက်အချိုးချလို့ရတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
လီလီကောင်းရဲ့ အဆိုအရ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တိုးတက်များပြားလာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းကတော့ ချာခ်ျခေါ် ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း တွေရဲ့ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဘုရားကျောင်းတွေဟာ ပညာတတ်ပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့ လူထုအပေါ် အဓိကထား အာရုံ စိုက်ကြကြောင်း၊ မိမိတို့ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓ ဒါမှမဟုတ် တာအိုဘာသာဝင်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိဘတွေဟာ လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒီဘာ သာတရားကို ကျင့်ကြံခြင်းမရှိတော့တာကြောင့် သားသမီးတွေကလည်း ဘာသာပြောင်းတာတွေ များပြားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သန်းခေါင်စားရင်းအရ ဟိန္ဒူနဲ့ မွတ်စလင် အရေအတွက်ကတော့ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၀ ထိနှိုင်းယှဉ်ရင် တည်ငြိမ်နေတာကို တွေ့ရပါ တယ်။
စင်ကာပူသို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ သာသနာများ ရောက်ရှိလာပုံ
၁၉ ရာစုအစောပိုင်းမှာ စင်ကာပူကို ၀င်လာကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ တရုတ်လူမျိုးတွေကနေ တဆင့် မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာ စင်ကာပူကို ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ Telok Ayer ဘူတာရုံနားက သီယန်ဖုဂေါင်နဲ့ Tai Seng Avenue ပေါ်ကဂျင် လောင်းဆီ ဘုရားကျောင်းတွေကတော့ အစောဆုံးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီနဲ့အတူ ပါလာကြတဲ့ တောင်အိန္ဒိယအနွယ် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကြောင့် စင်ကာပူမှာ ဟိန္ဒူသာသာနာ အခြေတည်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းမှာပဲ စတင်ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ ထိုင်းရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေ ယူဆောင်လာတာလို့ သိရပါတယ်။
အစ္စလမ်ဘာသာကတော့ ၈ ရာစု ဒါမှမဟုတ် ၉ ရာစုမှာ အာရပ်နဲ့ အိန္ဒိယမွတ်စလင်တွေ ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပြီး ၁၂ သို့မဟုတ် ၁၃ ရာစုကျမှ မလေးဘုရင့်နိုင်ငံတော်တွေရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို တရားဝင်ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းလာတာနဲ့အတူ စတင်အခြေတည်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ ယင်းကို အကာအကွယ်ပေးထားသည့် ဥပဒေများ
လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေက ပြဌာန်းပေးထားပါတယ်။ Interfaith dialogue ခေါ် ဘာသာ တရား အချင်းချင်း အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေ ရရှိစေဖို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပုံမျိုးကို စင်ကာပူအစိုးရက အားပေးပါတယ်။ ဘာသာရေးကိစ္စရပ် တွေမှာ စင်ကာပူအစိုးရကိုယ်တိုင် တက်ကြွလှုပ်ရှား သူနေရာကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ MRHA (The Maintenance of Religious Harmony Act) ခေါ် ဘာသာသာသနာများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ဥပဒေကတော့ ထင်ရှားတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေက PCRH (Presidential Council for Religious Harmony) ခေါ် သမ္မတကွပ်ကဲတဲ့ “ဘာသာသာသနာများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးကောင်စီ” စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ကို အထောက်အကူ ပြုပေးပါတယ်။ လက်ရှိ PCRH ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သမ္မတ တိုနီတန်ရဲ့ တိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးမှုအရ အငြိမ်းစား တရားသူကြီး မစ္စတာ ဂိုးဂျွန်းဆန်းက ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားပါတယ်။ PCRH က ဘာသာရေး သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေမယ့် အကြောင်းခြင်းရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို အကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သလို၊ MRHA ဥပဒေရဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်း အတွင်းမှာ အမိန့်ကြေညာစာတွေ ထုတ်ပြန်နိုင် ဖို့ရာအတွက်လည်း သမ္မတကို တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံရပါတယ်။ PCRH ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် စင်ကာပူရဲ့ အဓိက ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသာသနာအကြီးအကဲတွေကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
၁၉၉၀ နိုဝင်ဘာ ၉ မှ စတင်ပြဌာန်းပြီး ၁၉၉၂ မတ် ၃၁ မှ စတင်အသက်ဝင်စေခဲ့တဲ့ MRHA ဥပဒေမှာ – ဘယ်သာသနာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပါစေ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကသာ အောက်ပါ အချက်တွေထဲက တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်တယ်၊ ဒါမှမ ဟုတ် ချိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်လို့ ယူဆရင် အရေးယူ ခံရမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကြား အမုန်းတရား၊ ရန်လိုမှု၊ အကောက်ကြံမှုနဲ့ ရန်ညှိုးရန်စထားရှိမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာ အောင် ဆောင်ရွက်မယ်၊ ဘာသာရေး ကျင့်ကြံ ဆောင်ရွက်မှု ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးဖြန့်ချိမှု စတာတွေကို အကာအကွယ်ယူပြီး နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ လုပ်မယ်၊ ဘာသာရေး ကျင့်ကြံ ဆောင်ရွက်မှု ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးဖြန့်ချိမှု စတာတွေကို အကာအကွယ်ယူပြီး သမ္မတ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေ လုပ်ကိုင်ကြဖို့ တနည်းနည်းနဲ့ ကြိုးပမ်းမယ်၊ လှုံ့ဆော် တိုက်တွန်းမယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် မဟုတ်ပေမယ့်လည်း သာမာန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာသာသာ သနာတွေအကြားမှာ ရန်လိုမှု၊ အမုန်းပွားမှု၊ အကောက်ကြံမှုနဲ့ ရန်ညှိုးရန်စဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်။
အဲဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက restraining order ခေါ် ပိတ်ပင်တားမြစ်တဲ့အမိန့်ကို ကျူးလွန်သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ထုတ်ပြန်ပြဌားန်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်သူက restraining order ကို ထပ်ပြီးချိုးဖောက်ရင် ရာဇ၀တ်မှု မြောက် ပါတယ်။
အရေးယူမှုတွေထဲက အချို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ Jehovah’s Witnesses လို့ခေါ်တဲ့ ယေဟောဝါကို သက်သေခံသူများအမည်ရ ဘာသာရေးအဖွဲ့ကို စစ်မှုထမ်းခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အလံအား အလေးပြုခြင်း၊ နို်င်ငံတော်အား သစ္စာပြုအဓိဌာန်ခြင်း စတာတွေကနေ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့သလို ၁၉၈၂ မှာ Unification Church ကို ပိတ်ပစ်ခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
စင်ကာပူရင်ဆိုင်နေရသော ဘာသာသာသနာများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ ပြဿနာများ
စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းရဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း ကို လေ့လာရင် စင်ကာပူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘာသာသာသနာများအကြား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဘာတွေလဲဆိုတာ သိသာနိုင်ပါတယ်။
လီရှန်လွန်းပြောတဲ့ နံပါတ် ၁ ပြဿနာကတော့ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြန့်ချိသာသနာပြုခြင်း ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေကို မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာထဲ ၀င်ရောက်ဖို့ အတင်းအဓမ္မစည်းရုံးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လီရှန်လွန်းက “ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်တဲ့ သာသနာကို တခြားလူတွေကို ယုံကြည်ဖို့ ဖိအားပေးမယ် ဆိုရင် ဒါက အနှောင့် အယှက်ဖြစ်သလို ကျူးလွန်မှုလည်း မည်တယ်။ မကြာသေးမီက သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ ဖတ်မိကြမှာပါ။ လင်မယားနှစ်ယောက်က ခရစ်ယာန်အယူကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြန့်ချိတယ်၊ သူတို့ ဖြန့်ချိတဲ့ ခရစ်ယာန်အယူက တခြားအယူဝါဒတွေကို ကျူးလွန်စော်ကားရာလည်း ရောက်နေတယ်။ အဲဒီ အစော်ကားခံရတဲ့ အယူတွေက ခရစ်ယာန်အ၀န်းအ၀ိုင်းအပြင်က ဘာသာတွေ တင်မကဘူး၊ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေလည်း ပါနေတယ်။ အဲဒီလင်မယားက ကက်သလစ်တွေဟာ ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုကြ တယ်။ သူတို့ကို အရေးယူပြီး ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအမှုမျိုးလောက် ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပေမယ့် ပြဿနာဖန်တီးနိုင်တဲ့ အခြားကိစ္စတွေ ရှိနေသေးတယ်။
ဥပမာ ဆေးရုံတွေက ရောဂါကြီးတဲ့ လူနာတွေကို ဘာသာပြောင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ခဏခဏကြား သိနေရတယ်။ ဒီလူနာတွေက ဘာသာမပြောင်းချင်ဘူး။ လူနာတွေအနေနဲ့က သူတို့ဘ၀ထဲ စီးနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပြဿနာ တွေကို အလိုမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်နေရတယ်။ နောက်ထပ်ပြဿနာက ဘာသာခြားကို သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိမှုပဲ။ ဘာသာခြားရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု့ကို မလေးစားတာ၊ ဘာသာခြားရဲ့ သဘောဆန္ဒကို မလိုက်လျောပေးနိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ ခုဒီလိုပြောတော့ ခင်ဗျားက ဒီပြဿနာမျိုးကို အုပ်စု တစ်ခုနဲ့ အခြားအုပ်စုအကြားမှာရှိတဲ့ ပြဿနာပဲဆိုပြီးတော့ ထင်မယ်။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါမျိုးပြဿနာက မိသားစု တစ်စုထဲမှာတင်လည်း ရှိနိုင်တယ်။
တခါတလေကျတော့ အဖေအမေက ဘာသာတမျိုးကိုးကွယ်မယ်၊ သားသမီးကျတော့ အဖေအမေကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို စွန့်ပြီး တခြားဘာသာကိုးကွယ်တယ်၊ အဖေအမေက ကွယ်လွန်တော့ သူတို့ ဘာသာဓလေ့ထုံးတမ်း အတိုင်း သင်္ဂြိုလ်ခံရဖို့ ဆန္ဒထားတယ်၊ ဒီတော့ သားသမီးက အဖေအမေဆန္ဒကို မလိုက်လျောပေးဘူး၊ ဈာပနကို မတက်တော့ဘူး။ ဒါဟာ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စပါပဲ။ အစဉ်အလာဆိုတဲ့ ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် ဒါဟာ သားသမီးဝတ်မကျေပွန်တာပဲ၊ ဒါမျိုးတွေ မကြာခဏဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြဿနာ တစ်ခုက ဘာသာခြားကို သည်းမခံပေးနိုင်တာ၊ နားလည်မပေးနိုင်တာနဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့ ကိစ္စတွေ။ ဘာသာခြားအုပ်စုတွေကနေ ခွဲထွက်နေမယ်။ မရောနှော မဆက်ဆံဘူး။ ဒါဟာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ။ တသီးပုဂ္ဂလ ဆန်မှု။ ခင်ဗျားက ခင်ဗျားနဲ့ အမျိုးတူလူတွေနဲ့ပဲ ရောနှောမယ်။ အခြားလူတွေနဲ့ မရောဘူး၊ ဒီတော့ ခင်ဗျားအဖွဲ့အစည်းက အထီးကျန်တဲ့ အဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေပြီ။”
ဖော်ပြပါအချက်တွေကတော့ လီရှန်လွန်းပြောတဲ့ စင်ကာပူက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့ပါ။
ဘာကြောင့် ဘာသာသာသနာတွေအကြား သဟဇာတဖြစ်ခြင်းက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးတာလဲ
စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းက ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ဘာသာသာသနာတွေအကြား လိုက်လျောညီထွေ သဟာဇာတဖြစ်ဖို့ စင်ကာပူအတွက် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲဆိုတာကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြရရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့က လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သဟာဇာတဖြစ်ခြင်းကို အာမခံပေးနိုင်ပြီလို့ ဘယ်တော့မှ မဆိုသာဘူး။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းမယ်၊ ဒါ့ပြင် တချိန်ထဲမှာပဲ အခြေခံနည်းနာအချို့ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်။ အဲဒီ အခြေခံနည်းနာတွေထဲက အချို့ကို ပြောပြချင်တယ်။ ပထမက အုပ်စုအားလုံးသည် (ဆန့်ကျင်ဘက် ဘာသာသာသနာအားလုံးကို) သည်းခံတတ်ရမယ်၊ အစွန်းမ ရောက်ဘဲ အလယ်အလတ်သဘောထားမျိုး ထားရမယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကလည်း ဒီ (စင်ကာပူနိုင်ငံ) ကို ခရစ်ယာန် အသိုက်အ၀န်းကြီး ဖြစ်လာရမယ်လို့ မျှော်မှန်းနေလို့ မရဘူး။ မွတ်စလင်တွေကလည်း ဒီနိုင်ငံကြီးကို မွတ်စလင်နိုင်ငံ အသိုက်အ၀န်းဖြစ်လာရမယ်လို့ မျှော်မှန်းလို့ မရဘူး။ ဒီလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ၊ ဟိန္ဒူနဲ့ အခြားအုပ်စုတွေကလည်း မျှော်မှန်းနေလို့ မရဘူး။ ဒီမြေကို မတူကွဲပြားတဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေ အများကြီးက (တခန်းတကဏ္ဍစီ) နေရာယူထားတယ်။ သူတို့မှာ ကွဲပြားတဲ့ သွန်သင်ချက်၊ အလေ့အကျင့်တွေ ရှိတယ်။ အုပ်စုတခုထဲကို အကျိုးသက်ရောက်နေတဲ့ ဥပဒေမျိုးကို ဥပဒေလို့ မဆိုသာဘူး။ ဥပဒေဆိုတာ အားလုံးအပေါ် အကျိုးသက် ရောက်နေရမယ်။ မွတ်စလင်တွေ အရက်မသောက်တာနဲ့ ပဲ အရက်ကို ပိတ်ပစ်ဖို့မလိုဘူး။ ဘာသာအများစုက တားမြစ်တဲ့ လောင်းကစား မှုကိုလည်း ပိတ်ပစ်စရာမလိုဘူး။ အားလုံးက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်လိုကြတယ်ဆိုရင် ‘live and let live’ ခေါ် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မှီတင်းနေထိုင်မယ်၊ အခြားသူကိုလည်း နေရာပေးပြီး မှီတင်းနေထိုင်စေမယ်ဆိုတဲ့ နည်းနာကို ကျင့်သုံးရမယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ရောထွေးမနေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ်။ စင်ကာပူရဲ့ သာသနာဟာ အမေရိကရဲ့ သာသနာမဟုတ်သလို အစ္စလာမ်မစ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ သာသနာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ- အီရန်ကို ကြည့်မယ်။ အစ္စလာမ်မစ်တိုင်းပြည်။ အားလုံးက ရှီးယိုက်တွေ။ သူတို့တွေ ရွေးကောက်ပွဲလုပ် ကြတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက ကြမ်းတမ်းတယ်။ ရလဒ်အပေါ်မှာလည်း ငြင်းခုန်တာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ အဟ်မဒ်ဒီနီဂျက်နဲ့ မူဆာဝီတို့ ပြိုင်ကြတာပါ။ နှစ်ဘက်စလုံးက အစ္စလာမ်သာသနာကို ဗန်းပြကြတယ်။ မူဆာဝီထောက်ခံသူတွေက စစ်ညာသံပေးသလိုမျိုး အလ်လာဟို့အက္ကဘာရ် (အလာဟ်အကြီးဆုံး) ဆိုပြီး ဟစ်ကြွေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အီရန်က ရှီးယိုက်အစ္စလာမ် မစ်နိုင်ငံ။ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့က အသိုက်အ၀န်းတစ်ခုထဲ အသွင်ပြန်ရောက်သွားမှာပဲ။ အကယ်၍ စင်ကာပူမှာ အုပ်စုတစ်ခုက (အီရန်မှာမဲဆွယ်သလို) ဘာသာရေးကို ဗန်းပြမယ်ဆိုရင်၊ အခြားအုပ်စုကလည်း သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ရှေ့တန်း တင်ပြီး ထောက်ခံမှုရဖို့ လုပ်လာကြမှာပဲ။ တအုပ်စုကလည်း ငါတို့က ဘုရားအလုပ်လုပ်နေတာလို့ဆိုမယ်၊ အခြားအုပ်စုကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ဆိုမယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောကြမယ်။ ဒါက တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကြီးပဲ။ ရလဒ်က ဘာသာခြားအုပ်စုနှစ်ခုအကြား အညိအစွန်းတွေဖြစ်လာမယ်၊ မျက်ရည်နဲ့ လမ်းခွဲရမယ်။ ဒါမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ (စင်ကာပူနိုင်ငံက) အလွန်သတိဝီရိယကြီးစွာနဲ့ ကိုင်တွယ်တယ်။ ”
စင်ကာပူက ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘာသာဝင်များအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလား
လီရှန်လွန်းက ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမျိုးသားနေ့မိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
“စင်ကာပူရဲ့ ဘာသာသာသနာများအကြား သဟဇာတဖြစ်မှုအခြေအနေကို အာမခံချက်ပေးနုိုင်တဲ့အဆင့်လို့ ဆိုရင် ရကောင်း ရနုိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူကို အလည်အပတ်ရောက်လာတဲ့သူတွေကတော့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အံ့သြကြတယ်။ မကြာသေးခင်ကာလကပဲ ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဦးဆောင် ဓမ္မသတ်မှူး (မုဖ်သီ)နဲ့ ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ဆီက ပညာတော်တော်ရလိုက်တယ်။ သူက စင်ကာပူရဲ့ လူမျိုးစုတွေ၊ ဘာသာသာသနာတွေအကြား နားလည်မှုရှိစွာ ငြိမ်းချမ်းနေတာကို ရည်ညွှန်းပြီး နိုင်ငံရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရတနာလို့ ကင်ပွန်းတပ်တယ်။ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ဘယ်လိုမျိုး သည်းခံရောင့်ရဲနေကြသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ သူက တော်တော်ကြီး အထင်တကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဆီးရီးယားဓမ္မသတ်မှူးက ကျွန်တော်ကို ဒီလိုပြောတယ်။ ဥပမာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကလေးတစ်ဦး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကလေးတစ်ဦး၊ မွတ်စလင်နဲ့ဂျူးဘာသာဝင် ကလေးတစ်ဦး စုစုပေါင်း လေးဦးရှိတဲ့ မိခင်အနေနဲ့ ဘယ်ကလေးကို ပိုချစ်မလဲဆိုပြီးတော့ပါ။ ဒီမေးခွန်းက သူကပဲ ခုလို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းက မဖြစ်နုိုင်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးပဲ၊ မိခင်က သူ့ကလေး လေးဦးစလုံးကို သာတူညီမျှချစ်မှာပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အားလုံးက သူ့ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလေးဦးထဲကမှ ကျန်တဲ့ သုံးဦးအပေါ် အကောင်းဆုံး ကြည့်ရှုစောင့် ရှောက်တတ်သူကို မိခင်က ပိုပြီး သဘောကျလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ကျွန်တော်က ဆီးရီးယားဓမ္မသတ်မှူးကို ကျေးဇူးတင် တဲ့အကြောင်း ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ တဆက်တည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စင်ကာပူသည်လည်း ပန်းတိုင်ကို လုံးဝဥဿုံ အရောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ မခံစားရသေးတဲ့အကြောင်း၊ ကျွန်တော်တုို့အနေနဲ့ သတိဝီရီယထား ကြရအုန်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အငြင်းပွားမှုမျိုး ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို တကွဲတပြားဆီ ဆွဲထုတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။”
နိုင်ငံသားတွေရဲ့ သဘောထားကို သိသာအောင် ဘယ်လို ရှာဖွေဖော်ထုတ်မလဲ
နိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ သူနဲ့ လူမျိုးမတူ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာမတူတဲ့ အခြားနိုင်ငံသားတစ်ဦးအပေါ် သဘောထား ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကို သိအောင် လုပ်ယူကြရပါမယ်။ ဒါမှသာ သင့်တင့်မျှတတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်မှု မျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူကတော့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ သဘောထားကို survey ခေါ် စစ်တမ်းတွေ ကောက်ပြီး လေ့လာကြပါတယ်။
နန်ယန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (NTU) က ဦးစီးဆောင်ရွက်တဲ့ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာလထုတ် “စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲများအကြား ဆက်ဆံရေးံ” ခေါင်းစဉ်ပါ စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာကို လေ့လာကြပါမယ်။
ဒီစစ်တမ်းမှာ လူမျိုးကြီးလေးခုဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ မလေး၊ အိန္ဒိယ နဲ့ အခြားဆိုတဲ့တာတွေကို အုပ်စု ၄ခု ခွဲတယ်။ ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် တာအို၊ အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဘာသာမဲ့ ဆိုပြီး ဘာသာတွေအလိုက်က အုပ်စု၎ ခု ခွဲတယ်။ စစ်တမ်းကို ပါဝင်ဖြေဆိုသူပေါင်း ၁၈၂၄ ဦးအပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်ပြထားတယ်။ စစ်တမ်းပါ မေးခွန်းတွေက ရိုးရှင်းတယ်၊ ဖြေဆိုသူရဲ့ သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိသာစေတယ်၊ ဖြေဆိုသူကိုလည်း မေးခွန်းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတာ သိသာအောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ ရှောင်ပြီး စကားလုံးကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ထိထိမိမိ သုံးထားတယ်။ ဒီစစ်တမ်းမှာ အဓိက မေးခွန်းတွေက ဥပမာ – ပါဝင်ဖြေဆိုသူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သို့မဟုတ် တာအိုဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။ သူ့အတွက်မေးခွန်းက –
မေးခွန်း (၁) ဘ၀မှာ အရေးကြီးတဲ့ အခမ်းအနားတွေကို ဘယ်လို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ကျင်းပလိုပါသလဲ။ (ဥပမာ – မွေးနေ့ကနေ မင်္ဂလာအခမ်းအနားအထိ) ရွေးချယ်ဖို့က – ဗုဒ္ဓဘာသာတာအိုသူငယ်ချင်းများ၊ မွတ်စလင် သူငယ်ချင်းများ၊ ဟိန္ဒူသူငယ်ချင်းများ၊ ခရစ်ယာန် သူငယ်ချင်းများ၊ အခြားဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းများ၊ ဘာသာမဲ့ခေါ် free thinkers သူငယ်ချင်းများ။ ဖြေဆိုသူက သူရဲ့ အထူးအခမ်းအနားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သို့မဟုတ် တာအို သူငယ်ချင်းဘယ်လောက်ထိ ပါဝင်စေချင်သလဲ၊ တခြားဘာသာဝင်တွေကို ဖိတ်ချင်ပါသလား၊ မွတ်စလင်တွေပါရင် နှစ်သက်သလား၊ ဟိန္ဒူတွေ ပါရင် နှစ်သက်သလား၊ ခရစ်ယာန်တွေပါရင် နှစ်သက်သလား၊ ဘာသာခြားတွေပါရင်ရော၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာမဲ့တွေ ပါရင်ရော နှစ်သက်ပါသလား။ ဘယ်လောက်ထိ နှစ်သက်ပါသလဲ၊ စသဖြင့် ဖြေပေးရပါတယ်။
မေးခွန်း (၂) ကတော့ သားသမီးတွေရဲ့ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများ။ ကိုယ့်မွေးထားတဲ့ သားသမီးများရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဘာသာခြားတွေ ပါနေရင် လက်သင့်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
မေးခွန်း (၃) ကတော့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများရဲ့ ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် ဇနီး။ ကိုယ့်ရဲ့ ခယ်အို သို့မဟုတ် ခယ်မကသာ ဘာသာခြားဖြစ်နေရင် လက်သင့်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
မေးခွန်း (၄) ကတော့ မိမိကိုယ်ပိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်းသို့မဟုတ် ဇနီး။ ဘာသာခြားကို ခင်ပွန်းသို့မဟုတ် ဇနီးအဖြစ် ရွေးချယ်မလား။
မေးခွန်း ၁ ကနေ ၄ အထိက ပုဂ္ဂလိက (personnel) နဲ့ ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ ဘုံမေးခွန်း (public) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း (၅) ကတော့ social ခေါ် လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
၅.၁ ကိုယ့်ရဲ့ အနီးကပ်ဆုံးအိမ်နီးချင်းဟာ ဘာသာခြားဖြစ်နေရင် ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးကွဲဖြစ်နေရင် လက်ခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာ။
၅.၂ ကိုယ့်ကို စာသင်ကြားပြသပေးတဲ့ ဆရာများဟာ လူမျိုးကွဲ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာကွဲဖြစ်နေရင် လက်ခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာ။
၅.၃ ရထား သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ထိုင်ရင် ဘေးချင်းကပ်လျက်ထိုင်နေတဲ့သူက လူမျိုးကွဲသို့မဟုတ် ဘာသာကွဲဖြစ်နေရင် လက်ခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာ။
၅.၄ အကူအညီလိုအပ်လို့ အကူအညီတောင်းချင်ရင် ဘာသာခြား သို့မဟုတ် လူမျိုးကွဲထံမှာ အကူအညီ တောင်းချင်ပါသလား။
မေးခွန်း (၆) ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။
၆.၁ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားသူဌေးထံမှာ အလုပ်လုပ်လိုပါသလား။
၆.၂ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေနဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်လိုပါသလား။
၆.၃ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေကို ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာ ခန့်ထားလိုပါသလား။
မေးခွန်း (၇) ကတော့ နိုင်ငံရေးမေးခွန်းတွေ။
၇.၁ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ နယ်မြေရဲ့ ပါလီမန်အမတ်က ဘာသာခြားလူမျိုးခြားဖြစ်နေရင် လက်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
၇.၂ စင်ကာပူရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်က ဘာသာခြားလူမျိုးခြားဖြစ်နေရင် လက်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
၇.၃ စင်ကာပူရဲ့ သမ္မတက ဘာသာခြားလူမျိုးခြားဖြစ်နေရင် လက်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
မေးခွန်း (၈) က လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။
၈.၁ ရဲဌာနက ရဲသားတွေထဲမှာ ဘာသာခြားလူမျိုးခြားပါနေရင် လက်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
၈.၂ စစ်သားတွေထဲမှာ ဘာသာခြားလူမျိုးခြားပါနေရင် လက်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ။
မေးခွန်း (၉) ကတော့ လူနည်းစုနဲ့ လူများစုဆိုတဲ့ majority – minority အဆင့်သတ်မှတ်ထားမှုတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ လူနည်းစု လူမျိုးကွဲနဲ့ လူများစုဆိုပြီး အုပ်စုတွေ ကွဲပါတယ်။ အဲဒီလိုကွဲတဲ့အခါ –
၉.၁ နေရာတစ်နေရာကို သွားလို့ အဲဒီမှာ တရုတ်တွေချည့်ပြည့်နေရင် ဒါမှမဟုတ် မလေးတွေချည့်ပြည့်နေရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အိန္ဒိယတွေချည့်ပြည့်နေရင် ဒါမှမဟုတ် ဘာသာခြားတွေချည့်ပြည့်နေရင် လက်ခံနိုင်မှု၊ သွားရောက်လိုမှု အတိုင်းအတာ။
၉.၂ စင်ကာပူရဲ့ လူများစုလူမျိုးက တရုတ်တွေဖြစ်လာရင် ဒါမှမဟုတ် အိန္ဒိယတွေဖြစ်လာရင် ဒါမှမဟုတ် မလေးတွေဖြစ်လာရင် ဒါမှမဟုတ် ဘာသာခြားလူမျိုးကွဲတွေဖြစ်လာရင် လက်ခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာ။
အောက်ဖော်ပြပုံကတော့ မေးခွန်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီး ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်တွက်ချက်ပြီး အဖြေထုတ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သို့မဟုတ် တာအိုဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေထားပြီး အဲဒီဖြေဆိုထားချက်အားလုံးအပေါ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အောက်ဆုံးမှာ မေးခွန်းတွေအလိုက် ရရှိလာတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေကို mean value ဆိုတဲ့ သမတ်ကိန်းနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရလဒ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ သို့မဟုတ် တာအိုဘာသာဝင်များဟာ မွတ်စလင်များနဲ့ အဆက်အဆံ လုပ်လိုမှု ဒါမှမဟုတ် မွတ်စလင်များကို နှစ်လိုမှုက ၈၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူများကို အဆက်အဆံလုပ်လိုမှု ဒါမှမဟုတ် နှစ်လိုမှုကလည်း ၈၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရစ်ယာန် များကို အဆက်အဆံလုပ်လိုမှု ဒါမှမဟုတ် နှစ်လိုမှုက ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြားဘာသာဝင်များနဲ့ အဆက်အဆံလုပ်လိုမှု ဒါမှမဟုတ် နှစ်လိုမှုက ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဘာသာမဲ့များကို နှစ်လိုမှု ဒါမှမဟုတ် အဆက်အဆံလုပ်လိုမှုက ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စစ်တမ်းရဲ့ အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းအရ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့တဲ့ ဘာသာကွဲလူမျိုးကွဲအားလုံးရဲ့ အနည်းဆုံး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက မိမိနဲ့ အမျိုးမတူ ဘာသာလူမျိုးကွဲနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၊ အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြရမှာကို လက်ခံနှစ်လိုကြကြောင်း သိရပါတယ်။
လူမျိုးဘာသာကွဲပြားမှုကြောင့်် ဖြစ်လာမယ့် အစိုင်အခဲတစ်ခုခုကို ကြိုတင်တွက်ချက်မိစေဖို့ အဓိကပြဿနာနှစ်ရပ် တင်ပြဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်း စစ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။ နံပါတ် ၁ က ဘာသာကွဲလူမျိုးကွဲအုပ်စုတိုင်းရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု အလေ့အထအပေါ်မှာ လူမျိုး ဘာသာ ကွဲပြားခြင်းက ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးသက်ရောက်နေသလား၊ တကယ်လို့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေတယ် ဆိုရင် အဲဒီသက်ရောက်ခြင်းက အမြဲတမ်းရှိနေတာလား၊ အုပ်စုကွဲ တစ်စု ဒါမှမဟုတ် ဘာသာအမျိုးအစား တစ်ခုအားဖြင့် သက်ရောက်နေတာလား။ နံပါတ် ၂ က လူမျိုးကွဲအုပ်စုတိုင်း၊ ဘာသာကွဲအုပ်စုတုိုင်းက မိမိတို့နဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ အခြားအုပ်စုအားလုံးအပေါ်မှာ တပြေးညီ သဘောထားမျိုးရှိရဲ့လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ အုပ်စုတစ်ခုကိုတော့ဖြင့် ကွက်ပြီး အခြားအုပ်စုတွေထက် ပိုနှစ်သက်နေသလား ဆန်းစစ်ပါတယ်။
စစ်တမ်းဖော်ပြချက်အရ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများဟာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်တဲ့ ကိစ္စအပါအ၀င် အခြားကိစ္စအားလုံးမှာ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲဖြစ်နေခြင်းကို အရေးတကြီးနေရာထားပြီး စဉ်းစားရမယ်လို့ မသတ်မှတ်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူက လူမျိုးကွဲအုပ်စုတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရွေးချယ်ရာမှာတော့ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲပြားနေခြင်းကို အရေးကြီးတဲ့ နေရာကနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်း ဆန္ဒမဲ ပေးခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုးကတော့ အားလုံးလိုလားအနှစ်သက်ဆုံးလူမျိုးဖြစ်တယ်လုို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်လူမျိုး ကတော့ အခြားလူမျိုးကွဲကို လိုလားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။ ဘာသာရေးမှာဆိုရင်တော့ တာအို သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို လိုလားနှစ်သက်မှုအများဆုံးရှိကြပေမယ့် တာအို သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ ဘာသာကွဲကို လိုလားမှု အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်ဖြေဆိုကြတဲ့သူတွေဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဘာကြောင့် အဲလိုဖြေဆိုခဲ့တာလဲဆုိုတာနဲ့ ဘယ်အကြောင်းတွေက သူတုို့ကို အဲလို အဖြေပေးဖို့တိုက်တွန်းနေသလဲဆိုတာတွေကို အသေအချာလေ့လာဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ နုိုင်ငံသားတွေရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတမျိုး ဖြစ်သလို အတုယူစရာ တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
စင်ကာပူရဲ့ ဘာသာကွဲ လူမျိုးကွဲအပေါ်ထားရှိတဲ့ သဘောထားနဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံကို အတုယူသင့်သလား
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အတုယူသင့်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဥပဒေအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပညာပေး အစီအစဉ်တွေအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း စိစစ်ကြပ်မတ်ထားတာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးဟာ စင်ကာပူမှာ စံပြပုံစံအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူရဲ့စံပြ သရုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အစ္စလာမ်သာသနာထဲက ကမ္ဘာပေါ်မှာ နောက်လိုက်လူဦးရေအများဆုံး အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ရဲ့ ဦးစီးခေါင်းဆောင် ခလီဖာ (Caliph) က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ က ခုလို မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “စင်ကာပူအစိုးရက သာသနာတစ်ခုကို ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချတာမျိုး ခွင့်မပြူပေမယ့် သာသနာတစ်ခုရဲ့ အပြုသဘောဆောင် သွန်သင်ချက်တွေကို ဖြန့်ချိဖို့အတွက်တော့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့် စင်ကာပူက အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေအတွက်တော့ အခြေအနေကောင်းတစ်ခု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဝေဖန်မှုအချို့ရှိနေပေမယ့် pew research centre ရဲ့ အဆိုအရ ဘာသာကွဲပြောင်း အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ စင်ကာပူကတော့ အတုယူရမယ့် စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာက ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူရဲ့ လက်ရှိခေါင်းဆောင် လီရှန်လွန်းပြောပြထားတဲ့ အချက်တွေကလည်း ဂရုဓမ္မပြု စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေဖြစ်သလို အတုယူဆောင်ရွက်ရမှာတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ “မိဘက သားသမီးတွေအားလုံးအပေါ် တပြေးညီ ချစ်ပေမယ့် မောင်နှမအချင်းချင်းအပေါ်မှာ အနွံတာခံတဲ့ သားသမီးကို ပုိုပြီး သဘောကျလက်ခံ လေ့ရှိတယ်” ဆိုတာကို အထူးသတိပြု မှတ်သားကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“Live and let live” ဆိုတဲ့ မိမိသည်လည်း မှီတင်းနေထိုင်မယ်၊ အခြားသူကိုလည်း နေရာပေးပြီး မှီတင်းနေထိုင်စေမယ် ဆုိုတာနဲ့ဘာသာ ရေးကို နိုင်ငံရေး မှာ နှီးနွယ်ပတ်သတ်မနေစေရဘူးဆိုတာ တွေကလည်း ဆင်ခြင်မှတ်သားစရာ ကောင်းလှတဲ့ အချက်များပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
၁) ၂၀၁၄ ဧပြီလထုတ် The Review of Religions မဂ္ဂဇင်းပါ Religious Trends in Singapore ဆောင်းပါး။
၂) စင်ကာပုူဝန်ကြီးချုပ်၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၆ ရက်၊ အမျိုးသားနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း
၃) A report on inter-racial and inter-religious relations in Singapore
၄) စင်ကာပူ ၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်း
ဘာသာရေး – အစ္စလာမ်သာသနာထဲမှ အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ (http://bit.ly/1hDyvCD)
ယခုဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုပါက စာရေးသူအား ဆက်သွယ်ရန်
ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ – https://www.facebook.com/tinnasir
ဆက်သွယ်ရန် – tmhtwe@gmail.com
Block 661A, Jurong West Street 61, #03-408, Singapore 641661
Singapore FIN: G0740085W Ph: +65 98581727
2 Responses to တင်မောင်ထွေး – အတုယူစရာ စင်ကာပူက လူမျိုးဘာသာကွဲပြားမှု
catwoman on June 1, 2014 at 3:15 am
very good article. people in Burma should read it. Buddha always taught us to respect other religions and beliefs.
Ko Aung on June 3, 2014 at 4:49 am
မြန်မာနိုင်ငံ မှာအဲလိုစနစ် လုပ်နိုင်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ